Zvomumagaba Peach Peach muTin
Zvibereko zveMakineni muTin
VF miriwo nemichero
Muriwo mabhisikiti akapoterera
Kudya kwemangwanani Biscuits
Makedheni mandarin orenji muGirazi Jar
Zvomumagaba Yero Peach muGirazi Jar
Yakaomeswa Nhema Bean Curd Zvimiti
Yakaomeswa Bean Curd Sheets
Tbhisikiti rake rinotapira, kana mutengesi, ndomumwe wevanotengesa zvakanyanya pamusoro pemakore nemutengo wekukwikwidza, unokodzera kutsiva kwekudya kwemangwanani, nguva yekuzorora kwehofisi, musasa, shamwari dzinoungana.
Kudzora kwakasimba kunoitwa mune yega yega maitiro, kubva kune yakasvibirira kutengesa zvinhu, kugadzirisa uye kuyedza kwemhando yepamusoro kuona kuti chigadzirwa chinosangana nemitemo inoteererwa uye inoenderana, pamwe nezvinodiwa nevatengi.
Crispy Mabhisikiti (Cracker)
Iri bhisikiti rinotapira, kana bhureki, nderimwe revatengesi vedu vakanyanya pamusoro pemakore nemutengo wekukwikwidza, unokodzera kutsiva kwekudya kwemangwanani, nguva yekuzorora kwehofisi, musasa, shamwari dzinoungana.
Zvisungo (Onion Salty flavour):
Hura yegorosi, Granulated Sugar, Yakanatswa Vegetable Oiri, Onion, Munyu, Chive Slice, Hydrolyzed Vegetable Protein, Chikafu Chekuwedzera (Sodium glutamate, Calcium carbonate, Ammonium bicarbonate, Sodium bicarbonate, Disodium dihydrogen Pyrophosphate, Sodium Stearyl lactic acid, Sodium Metabisulfite, ), Chikafu chinodyiwa.
Flavour: Mukaka Wakanaka / Onion Munyu / Mutsvuku jujube / Nhema sesame
Tsanangudzo: 200g * 40 mabhegi / CTNs
Pasuru: Mabhegi emukati, ekunze Makatoni. (Around mazana emakatoni pa20 GP mudziyo.)
Pasherufu hupenyu: 12 Mwedzi
Kuchengetedza: Nzvimbo inotonhorera uye yakaoma, dzivisa zuva rakananga kana nzvimbo dzine hunyoro.
Chitupa: HACCP, ISO9001, ISO45001, ISO22000
Zvimiro zve crispy mabhisikiti
1.Four flavour, dzimwe sarudzo
2.Simple kavha dhizaini, yakanyanya kunaka
Matanda maviri epurasitiki kurongedza.
Samples mutemo: Mahara sampuli anowanikwa, vatengi vanowanzo fanirwa kubhadhara yekutakura mitoro.
Nzira yekubhadhara: T / T, L / C pakuona, dzimwe nzira ndapota bvunza nesu kutanga.
Lead nguva: Kazhinji 15- 25 mazuva mushure mekurairwa kwasimbiswa, maOEM maodhiyo anove akati rebei.
Pashure: Kudya kwemangwanani Biscuits
Zvadaro: Muriwo mabhisikiti akapoterera
Mashanu Zviyo Biscuit
Kudya Nzungu Dzakarungwa, Soy Sauce Mapaketi, Vana Mabhisikiti, Ladyfinger Cookie, Mutsva Bean Curd Stick, Hawthorn Strip,